Ekoadaoro: Ny feon’ny findaiko sy ny fitantarana isan’andro ataon’olontsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2018 3:39 GMT
Ao amin'ny faritra saro-dalana manodidina an'i Quito, Ekoadaoro, napetraka ny kamiao kely norakofana tsara nandritra ny tontolo andro mba hampianatra momba ny tontolon'ny fitantarana isan'andro ataon'olon-tsotra. Ahitana seza maro ary koa birao mihitsy aza ao anatin'ilay fiara, antsoina hoe “Mi Voz Móvil” (Ny Feon'ny Findaiko), ampy tsara handraisana mpanao gazety. Nampiasaina miaraka aminireo atrikasa ireo ihany koa ny solosaina finday miaraka amin'ny karatra mba hahafahan'ny mpandray anjara mamoaka mivantana ny votoatiny ao amin'ny tranonkala. Ity tetikasa ity dia tohanan'ny gazety Ultimas Noticias [es] (Vaovao farany) izay ampahany amin'ny orinasan'ny media lehibe indrindra El Comercio [es]. Ity misy lahatsary sy fanazavana fohy nataon'i tonian-dahatsoratry Ultimas Noticias, Leonel Bejarano..
Hoy ny tranonkala:
Isan'andro dia mahita tranga izay mety ho vaovao ianao. Na izany aza, tsy misy mpanao gazety akaiky foana. Raha manatri-maso tranga heverinao fa mahaliana ny Últimas Noticias ianao, dia soraty amin'ny fanontana an-gazety na nomerika,ny tantaranao na makà sary (lahatsary na sary). Afaka mamoaka izany ny Ultimas Noticias ary mety hanondro izany ho toy ny lahatsoratra/sarin'ny herinandro na volana. Alefaso amin'ny alàlan'ny findainao (SMS), na amin'ny alalan'ny sary na horonan-tsary (MMS), na mailaka ny lahatsoratrao. Ankehitriny dia afaka ny ho mahomby amin'ny fanaovan-gazety ianao.
Ny mety mampiavaka ity amin'ireo tetikasa hafa mitovy aminy dia ny vaovao sy ny votoaty avy amin'ny olom-pirenena mpanao gazety antsoina hoe Vecinos Reporteros (Mpanao gazety eo amin'ny manodidina), izay mifanakaiky amin'ireo mpiasa matihanina mandray karama ny sangan'asan'izy ireo. Raha ny marina, dia miara-miasa akaiky amin'ny mpiasa ao amin'ny Ultimas Noticias ihany koa izy ireo mba hanamarina, hampivoatra kokoa ny tantara sy ny famoahana araka ny fenitra. Nomena fahafaham-po mijery ny sonian'izy ireo amin'ny lahatsoratra ny Vecinos Reporteros. Afaka mifaninana amin'ny loka isan-kerinandro sy isam-bolana ihany koa izy ireo, saingy tsy izany no tena manosika ny maro, hoy ny tonian-dahatsoratra Leonel Bejarano, satria misy ireo sasany tsy mitaky ny loka mihitsy.
Mahazo fandraisana anjara amin'ny alàlan'ny mailaka ny Ultimas Noticias, ary manaiky izay lahatsoratra nosoratana tamin'ny taratasy na tamin'ny boaty fandrotsahana izany manerana ny tanàna. Nandritra ny resadresaka niarahana tamin'ny tonian-dahatsoratra, Leonel Bejarano, nilaza tamiko momba ny iray tamin'ireo tantara tsy hay hadinoina indrindra nomen'ny Neighborhood Reporters.
Zazavao antsoina hoe Diego Ortiz, izay nanao ny fanompoana ara-miaramila no voadaroka mafy sy nampijaliana. Te-hihazona ny tantara ho azy irery ny miaramila ary nandràra ny gazety tsy hitafatafa amin'ilay miaramila ary ireo havana ihany no navela nitsidika tao amin'ny hopitaly. Nisy havana tezitra noho ny fepetra niainan'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy ka nanapa-kevitra ny handefa ny tantara tany amin'ny Ultimas Noticias miaraka amin'ireo tantara sy sary manokana izy. Nanoratra ity tantara voalohany ity [es] i Omar Patricio Ramos Silva, Neigborhood Reporter, ary notohizany tamin'ny vaovao farany:
Nampidirina hopitaly izy tamin'ny 16 Novambra ary nahitana ratra marobe noho ny fianjerana, araka ny filazan'izy ireo, anisan'izany ny fahatapahana teo amin'ny vody miaraka amin'ny fivoahan-drà anatiny. Nandritra ireo andro vitsy lasa, dia tsy maintsy niatrika fahasarotana marobe ny ray aman-drenin'i Diego, satria tsy mahay mamaky teny sy tsy nanam-bola izy ireo. Noho izany sy noho ny fepetra iainan'i Diego, dia niezaka namaha ny olana niaraka tamin'ny fianakaviana izy ireo ka tsy navoaka ampahibemaso ny raharaha. Na dia ny olona nahatonga ilay ratra aza, Cabo Castillo dia tonga tao amin'ny hopitaly nandrahona an'i Diego, ary raha nahita olona iray afaka nametraka azy teo amin'ny toerany izy, dia nilaza fa tonga fotsiny hangataka famelan-keloka amin'i Diego, ary raha nahita ny havany izy dia ny niala no azony natao ary tsy navela hiditra intsony izy.
Noho ireo tantara ireo, Ramos Silva no nahazo ny loka Akoholahy volamena, izay nomena ho an'ny lahatsoratra/sary tamin'ny herinandro. Angamba ny lafiny mahaliana indrindra amin'ity tantara ity dia i Ramos Silva mpikambana ao amin'ny Departemantan'ny Vola El Comercio, izay te-handray anjara amin'ny gazety sy manohy manoratra tantara hafa ho an'ny gazety. Izany no antenain'ny gazety hitohy, mahita olona izay mety tsy mpanao gazety amin'ny fampiofanana, saingy manana faniriana hizara zavatra misy dikany ho azy ireo na amin'ny fiarahamoniny.